Izmir Metro ma aha tunnel-ka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirIsku-daba-marinta İzmir, ma aha tii dhimashada
12 / 07 / 2014 35 Izmir, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Metro, TURKEY
Xarka dhimashada, maaha Izmir Metro: Egeli Sabah waxay gaartay warbixinta ay diyaarisay METU ee 2012 ee labada saldhig in la furi doono dhamaadka bishan. Warbixinta saameynta bamka, khataraha dhimashada ee tunnel ayaa la adkeeyay
Dawlada Hoose ee Magaalada polzmir waxay bilawday inay dhisto labadii saldhig ee ugu dambeeyay onyol - Üçkuyular Metro oo la bilaabay in laga dhiso 2005 dabayaaqadii bishii 7aad. Qandaraaslaha qaatay shaqooyinka xarkaha tareenka ee İzmirspor iyo Hatay Stations iyo xariiqda oo dhami waxay gaareen warbixinta ay diyaarisay Qeybta Injineeriyada Farsamada Madaniga ee Bariga Dhexe. Warbixinta oo aan loo shaacin dadweynaha illaa iyo maanta oo ay qarsoodiga ku leedahay Degmadda Izmir Metropolitan, waxay daaha ka rogtay khatarta dilaaga ah ee sugaysa dadka reer Izmir tuneellada la filayo in loo furi doono adeegsiga muwaadiniinta maalmaha soo socda. Warbixinta, oo jabinaysa xariiq walba, waxay shaaca ka qaaday in xisaabinta u ogolaatay dhismaha tunelada in si qalad ah loo sameeyay iyo in cadaadiska biyaha iyo seismicismka la iska indhatirey markii mashruuca la soo saaray.
TUNNEL 2 WAA RIDAY WAQTIGII
Natiijo ahaan, 3 bishii Mee 2011, ka dibna 18 bishii Luulyo 2012, laba ilmood oo isku xigta ayaa ka dhacay tunnel-tareenka dhulka hoostiisa. Qeybta tunnel ee u dhexeysa saldhigyada Polygon iyo Fahrettin Altay, qeybta salka ee xargaha lagu rakibi lahaa ma hor istaagi karaan cadaadiska ka imanaya hoosta sababtoo ah cadaadiska biyaha lama xisaabin. Saldhigga xudunta xudunta ee 140, oo loo dhisay in laga ilaaliyo dhismaha qaab dhismeedka la taaban karo ee biyaha oo loo yaqaan 'go'doomin', qaab dhismeedka saldhigyada Polygon iyo Fahrettin Altay ayaa lagu daboolay biyo. Buga biyaha, oo ku soo celiyey tunnelka qulqulka biyaha, si dhib yar ayaa looga tuurayay tunnelka oo leh bambooyin. In kasta oo dhacdooyinka laga qarin jiray dadweynaha, xaqiiqda ah in furitaanka tareenka dhulka hoostiisa dib loo dhigo marar badan illaa maantadan la joogo waxaa daaha ka qaaday Egeli Sabah. Xiriirka u dhexeeya shirkadda qandaraaslaha iyo magaalada weyn ayaa shaaca ka qaaday in burburka ka dhacay gudaha tareenka dhulka hoostiisa lagu yiraahdo ben waxaan imanayaa fakat laakiin aagagga magaalo weynaha ma tixgelin digniintaas. Magaala-weyn, shirkadda qandaraaslaha ee taariikhaha kala duwan inay iska dhego-tirto digniinta si joogto ah OZTAS, ka dib dhacdooyinka dhici kara oo ka dhici kara Waaxda METRO ee Cilmiga Mashiinka Madaniga waxay diyaarisay warbixin ku saabsan burburka.
KOCAOĞLU kama uusan soo qeyb galin kulanka
Marka laga hadlayo nuxurka iyo natiijooyinka warbixinta, oo macno ahaan loo yaqaan aaladda masiibada, Assoc. Dr. Erdem Canbay wuxuu u yimid İzmir markay ahayd 5 Juun si uu u muujiyo kaydka uu ka qabo tunnelka. Si kastaba ha noqotee, midkoodna Duqa Magaalada Magaalada Izmir Aziz Kocaoglu ama Ku-Xigeenka Xoghayaha Guud ee Rail Systems Raif Canbek ma uusan soo xaadirin kulanka. Kadib, Canbay wuxuu qoray fikradihiisa. Mr. Ahmet Öztek, Maareeyaha Guud ee ÖZTAŞ, ayaa ra'yigiisa ka dhiibtay maqaal isaga oo wata maqaal ku yaal Izmir 2012. 18 iyada oo loo marayo nootaayada dadweynaha ee bisha Juun 6 waxaa loo diray Kocaoğlu, Waaxda Nidaamka Tareenka iyo lataliyaha STFA-Semaly SAOG. Fikradiisa, Canbay waxay soo jiidatay xaqiiqada ah in warbixinta ay soo diyaarisay shirkada latalinta ee STFASEMALY ee shirkadda dhexdhexaadka ah ee Dutch DHV waxay diiradda saareysaa oo keliya waxyeelada biyo-biyoodka, iyagoo sheeganaya in xaaladda la iska indhatirey marka loo eego tirakoob iyo xoojin la taaban karo.
HADA CAADIINTA BIYAHA biyaha
Canbay waxay sheegtey in sababta ugu weyn ee keentay burburka iyo waxyeelada ka dhacey tunnel-ka ay tahay cadaadiska biyaha oo aan la saadaalin karin; Sababta ay sidan u tahay waa nidaamka biyo-mareenka aan shaqeynayn, ayuu yiri. Sida ugu weyn ee ugu fashilmay nidaamka bullaacadaha, sida uu qoray ÖZTAŞ İnşaat qoraalo kala geddisan oo ku yaal degmada İzmir Metropolitan District, Assoc. Dr. Erdem Canbay wuxuu sii waday hadaladiisa sida soo socota; Nasıl Sida faahfaahintaan loogu habeeyay habkan iyo sida mashruucu loogu ansixiyay habkan waa mid laga fikiro. Haddii mashaariicda loo qorsheeyay si isdaba joog ah oo joogto ah, waxay mar labaad tahay waajib weyn in la arko sida farsamooyinka xakamaynta ay u oggolaanayaan dhumucda biyuhu waqtigooda. Sababtoo ah, sida lagu sheegay warbixinta DHV, xisaabinta tuneellada ayaa la sameeyay iyadoo loo eegayo '0' cadaadiska biyaha eber inta lagu gudajiray marxaladda naqshadaynta. Markaa in biyuhu ka baxaan ayaa muhiim u ah marinka dhulka hoostiisa
'SAMEEYN KARO Qaadashada'
Jiraan barta. Dr. Canbay, xisaabinta ayaa sheegtay in suunka tunnel uusan ku filnayn marka la eego dhulgariirku
METU ku xigeenka injineerinka madaniga Assoc. Dr. Maqaalka uu diyaariyay Erdem Canbay oo ay kujiraan aragtiyo ku saabsan dhismaha tunnelka, dillaacyada dushooda ayaa la xusay. Qaar ka mid ah dillaacyada ku jira 3 0.81 milimitir in ka yar hal bil ayaa lagu muujiyay warbixinta lagu muujiyey; Bilmek Waa dil in la ogaado in nidaamkan xasaasiga ah ee kumanaan kun oo qof ay maalin walba qaadi doonaan ay ku fadhiyaan meelo qarsoodi ah oo laga yaabo inay daqiiqad kasta ku dhacaan oo aan qatar gelin doonin wax khatar gelin ah. Intii lagu gudajiray daraasadaha mashruuca mashruuca xisaabinta tunnel-ka looma tixgalin doono maqaalka ayaa tilmaamay in dhulgariir, Izmir la xasuusiyay in aag dhulgariirkii ugu horreeyay. Jiraan barta. Dr. Canbay, gabagabadii warbixinta ayaa dhiibtay fikradahan soo socda; Deprem Waxaa la fahamsan yahay in culeysyada dhulgariirku aan lagu qaadin daraasadaha mashruuca. Xisaabinta ayaa muujineysa in tunnel tunnel uusan ku filneyn marka la eego dhulgariirrada. Xoojinta la taaban karo ee laamiga ayaan suurta gal ahayn caqabadaha meelaha bannaan awgeed. ”Dhanka kale, saraakiisha degmada Izmir Metropolitan Municipal ayaa waxay sheegeen in diyaarintii lagama maarmaanka ahayd la sameeyay isla markaana qalalaasaha laga saaray kadib markii ay jeexday gunta hoose ee tareenka dhulka hoostiisa mara.
Dhimashada geerida Route Crossroad
Sababta dhimashada ee fardaha jasiiraduhu ma aha ruam!
Izmir Metro iyo IZBAN wali kuma habboonayn naafada
Lugta hoosteeda ha ka cabsan tunnelka
Euboea Tunnel 2 ee Badda Bariga Bari. Tunnelka ugu dheer
Karahan Tunnel 4 5 bishiiba, Erkenek Tunnel ayaa la furi doonaa sannad kadib 'ayuu yiri
Kadıköy Kartal Metro KadıköyWaxay u adeegtaa E-5, ma e
Mashruuca subaxnimada ee Adana ma aha mashruuc caadi ah
Japanese Metro Ma Foon Train
Xarunta Xidhiidhka ee İzmir
Xarunta Fahrettin Altay
Xisaabinta ayaa bilaabatay furitaanka Istanbul-Eskisehir YHT